BILETA TOKANA - FAMPIELEZAN-KEVITRA : Efa azon’ny kandida alaina any amin’ny Céni
Amin’ny 12 novambra ho avy izao no handraisan’ny Céni ny fanontana ny bileta tokana tena izy any amin’ny tranompirintim-pirenena any Antananarivo, izay vao haparitaka any amin’ireo rantsa-mangaika rehetra any anivon’ny Faritra. 6 novembre 2019
Voahaja ny fiomanana araka ny tetiandro hikarakarana ny fifidianana, ary efa tafapetraka avokoa ny rafitra hikirakira ny latsa-bato, hoy Rakotonarivo Thierry, filoha lefitra ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Céni. Hizara telo ny refin’io bileta tokana io, ka natao taratasy A5 ho an’ny kandida ben’ny tanàna sy mpanolotsaina latsaky ny dimy ao amin’ilay kaominina, raha A4 kosa ny refin’ ny taratasy bileta tokana ho an’ny kandida miisa dimy ka hatramin’ny valo ary A3 raha mihoatra ny sivy ka hatramin’ny telo amby folo isa ny kandida ao amin’ny kaominina iray.
Niantso fitoniana ho an’ireo mpilatsa-kofidiana sy ny mpiandany amin’izy ireo ny Céni foibe sy ny Cfm na notarihin’ny filohany Maka Alphonse. Betsaka ny lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra izay azo fantarina any amin’ny biraon’ny Céni akaiky azy, ka anisan’izany ny tsy fahafahana manokana fotodrafitrasa mandritra ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra. Marihina fa nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny talata 05 novambra tamin’ny enina ora maraina teo ny fampielezan-kevitra manerana ny lafivalon’ny nosy, ary hifarana ny 25 novambra amin’ny misasak’alina. Maharitra roapolo andro ny faharetan’ity fampielezan-kevitra fifidianana ben’ny tanàna eto amin’ny tanin’ny repoblikan’i Madagasikara ity.
Notsiahivin’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana fa mariky ny demokrasia sy fitsinjaram-pahefana ny fifidianana ho an’ny firenena tan-dalàna, ary nanentana ny mpiray tanindrazana ny Céni mba ho tonga hanefa ny adidiny amin’izao fotoam-pifidianana izao. Indrindra hitandro ny soatoavina malagasy, ny firahalahiana sy ny fihavanana ho an’ireo kandida mpifaninana ho amin’io toeran’ny ben’ny tanàna io mandritra izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra izao, hoy hatrany ny antso avon’ ny Céni. Hisy ny fanaraha-maso ataon’ity vaomiera ity ho an’ireo kandida izay mihoa-pefy, ka misy ny sazy ho an’ireo tratra mandika izany lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra, hoy ny mpampaka-teny avy amin’ny Céni foibe, i Fano Rakotondrazaka. Hotaterina miandalana eto ny akon’ny fampielezan-kevitra aty amin’ny Faritra Boeny sy ny kaominina manodidina ahazoana vaovao.